မနက်ဖြန် – Tomorrow (14 September 2015) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » မနက်ဖြန် – Tomorrow (14 September 2015)
မနက်ဖြန် – Tomorrow (14 September 2015)
Posted by ဇီဇီ on Sep 13, 2015 in 2010/2012/2015 Election, How To.., Politics, Issues | 23 comments
ဦးတင်အေး က တော့ နက်ဖြန် ကပ်တဲ့ မဲ စာရင်းကလည်း ၃၀ ရာနှုန်းပဲ မှန်ဦးမယ် ဆိုပဲ။
မဲစာရင်းတောင် မှန်အောင်မကောက်နိုင်တဲ့ ဒေါ်စိန်အေးကျောင်းထွက် တွေလက် နိုင်ငံ ဆက်အပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သဘောပေါ့နော့။
သူတို့က ညစ်သထက် ညစ်မှာမို့ ကျနော်တို့က သေချာသထက်သေချာအောင် လုပ်ရအောင်ပါ။
နောက်ပြီး ဒီပုံလေးကို ကြည့်။
၅၆ နဲ့ ၄၃၆ တုန်းက လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲခဲ့တဲ့ မတရားသဖြင့်စံနစ်ကိုသာ ကြည့်ကြပါတော့ဗျာ…!!နိုင်တဲ့ ဟာကို ရှုံးအောင်လုပ်ထားတာ။
ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၅၀ % နိုင်မှ လွှတ်တော်မှာ ၃၇ % ပဲ ရမယ်။
ကျက်သရေတုန်းတွေက ၂၅ % ယူထားတာ။
(သူတို့ စစ်သား အစိတ်သားကို လွှတ်တော်ထဲ ထည့်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပဲ။ ခါးပိုက်ဆောင် တပ် လို့ ပြောတော့မကြိုက်ချင်)
ဒီတော့ NLD က ၅၀ % နိုင်ပြီး ဖွတ်တွေက ၂၀ % ပဲ နိုင်ဦး လွှတ်တော်မှာ ၁၅ % ရမယ်။(ကျန်စုစုပေါင်း ၃၀% က အခြားပါတီတွေက နိုင်တယ် ထားဦး)
NLD ဟာ ၃၇ %၊
ဖွတ်အတွက်က ၁၅ % + ၂၅ % = ၄၀ % နဲ့
သမ္မတကို ခန့်ပြီး အစိုးရဖွဲ့လို့ရတယ်။ (အစိတ်သား ခိုးပြီးသားကိုး)
NLD က ရွေးကောက်ပွဲမှာ စုစုပေါင်း မဲရဲ့ ၇၀ %နိုင်ထားမှ စိတ်ချလက်ချ သမ္မတ တစ်ယောက်တင်ပြီး အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်မယ်။
တကယ်လို့ ၆၅ % ဆိုရင် ဖွတ် ဘယ်လောက် နိုင်မလဲ ဆိုတာအပေါ်မူတည်မယ်။
ဖွတ်က ၃၅ % ရသွားရင်တော့တမတ်သားနဲ့ ပေါင်းပြီး ၅၁ % ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ၆၅ % အနိုင်က ၄၅ % သာ ဖြစ်လို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်။
အခြားပါတီတွေက အနိုင်ရမယ့် % ကိုထည့်တွက်ရင် ၆၅ % ကို ပါတီ တစ်ခုတည်းက နိုင်ထားရင်တော့ .. မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။
ဒီတော့ ၆၅ % နဲ့ အထက် နိုင်မှ အရပ်သား အစိုးရဖွဲ့ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ ၇၀ % နား နီးသွားရင်တော့ ပိုသေချာသွားမယ်။
ကြိုက်သလို ပြော …
ကြိုက်တဲ့ လူ .. ကြိုက်တဲ့ ပါတီကို အားပေး …
ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုထဲကအားလုံးပေါင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ NLD မဟုတ်တဲ့ ပါတီ တစ်ခုခုကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တဲ့လူကို သဘောကျလို့ မဲပေးလို့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ NLD အပြင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၇၀ % ဘယ်သူ(တွေ) ရအောင် လုပ်နိုင်မလဲ??????????
NLD က ၇၀ % ရမှ တိုင်းပြည်မှာ ထင်သာတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မယ်။ အရပ်သား အစိုးရ ဖြစ်မယ်။
NLD က ၇၀ % မှ မရရင် စစ်ဖိနပ်အောက်မှာပဲ … ဆက်နေကြရလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုလေးကို သေချာအောင် လုပ်ရအောင် မနက်ဖြန် မဲ စာရင်း ပြန်ကြည့်ပေးကြပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မဲစာရင်းမှာ ကိုယ့်နာမည်လေး မှန်မှန်ကန်ကန် ပါနိုင်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားပေးကြပါလို့။
အချက်အလက် Credit to ကိုထိုက်
ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီ (အပိုင်း ၁)
ကျုပ် Edit လုပ်ပြန်တင်လိုက်တော့.. အကုန်မြင်ရ…။
ဒီချုပ်အနိုင်ရပါက.. အမေရိကဆန်ရှင် အပြီးဖယ်ပေးရန်.. မြန်မာ-အမေရိကန်များကပါ…. အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးကြမည်ဖြစ်ပြီး… မြန်မာပြည်တွင်းသို့…
မက်ခ်ဒေါ်နယ်..။ ၇/၁၁၊ ဝေါမတ်။ မေစီစတိုး တို့နှင့်အတူ… စစ်လက်နက်အကောင်းစားကြီးများပါ… ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း..
ဆိုတာကို.. ထည့်ပြောလိုပါကြောင်း.. ရယ်..။
တဂျီးကတော့ တဂျီး ကို တဂျီးရယ်။
အမတ်တွေကို မပြေါခင် မဲ စာရင်းစစ်ဖို့ တောင် အာပေါက်နေတာ။
ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီ (အပိုင်း ၂)
ဒီနေ့ဖုံးတွေထဲကို မဲစာရင်းကပ်မယ်၊ သွားကြည့်ပါဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ၀င်လာတယ်။
SMS campaign တွေ ထင်ပါရဲ့ မမရေ
အဲဒါက တော်သေးတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ ကို မဲပေးပါ လို့ ပေးတဲ့ message တွေ လဲ ရှိနေသတဲ့။
အတိုကောက် အရဆိုရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ ရဲ့ အတိုကောက် Union Election
Commission (UEC) ဟုတ် မဟုတ် တော့ သိဘူး .. သူတို့ ပို့တာလို့ ထင် တာဘဲ အန်တီမမ
မဲဆန္ဒရှင်များ ဒါတွေသိပြီးပြီလား )
ဘယ်သူတွေ မဲပေးခွင့် ရှိသလဲ ?
၁ ။ ၁ ၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ
၂ ။ နိုင်ငံသား ။ဧည့်နိုင်ငံသား
နိုင်ငံသား ပြုခွင့် ရသူ
၃ ။ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်သူ
မှတ်ချက် ။ ။ သင်ဟာ နိုင်ငံသား
မပါဝင်ပါက မဲပေးခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်
သောကြောင့် မဲစာရင်း ကပ်ပြီးပါက
ရုံးတွင် မဖြစ်မနေ သွားကြည့်ရန်
( မဲဆန္ဒရှင်များဒါတွေသိပြီးပြီလား )
၁ ၈ ၀ ( ၆ ) လ ထက် မနည်းသော
နယ်သို့ မပြန်ပဲ မန္တလေးမြို့တွင် ပင်
မဲ ပေးလိုပါက ———————
# ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ
၏ ထောက်ခံချက် ။
# အလုပ်သမားဖြစ်ပါက အလုပ်ရှင်၏
# အခြားသူဖြစ်ပါက ကိုယ်ပိုင်
ဝန်ခံချက် တို့ နှင့်အတူ ရပ်ကွက်
တို့ ဖြင့် ပုံစံ ( ၃ / က ) ဖြင့်
ရွေးကေါက်ပွဲ မတိုင်မှီ ( ၁ လ )
## အကယ်၍ — ရပ်ကွက်
မြို့နယ်ကော်မရှင်သို့( ၃ ) ရက်
အတွင်း အယူခံ ဝင်ခွင့်ရှိသည် ။ ##
ဘယ် လို မဲ ပေး မ လဲ ?
ပုံစံ ( ၃ ) ဖြင့်
( မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော
အထောက်အထားများ —– )
၁ ။ သန်းခေါင်စာရင်း
၂ ။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်
# မိမိနာမည် မဲစာရင်းတွင်မပါပါက
ပုံစံ ( ၃ ) ဖြင့် ထိုသူ ကိုယ်တိုင်
( သို့) ၄င်း၏ကိုယ်စားတစ်ဦးမှ
တောင်းဆိုလွှာမှာ မှတ်ပုံတင်( သို့)
# နာမည် စာလုံးပေါင်း ။
အဖအမည် မှားယွင်းခြင်း ။
ပုံစံ ( ၄ – ဂ ) ဖြင့် ——- /
# မဲစာရင်းတွင် မပါသင့်သူများ
( ဥပမာ ) သေဆုံးပြီးသူ ။
နှစ်ခါထပ် ပါနေသူ များကို
ပုံစံ ( ၄ ) ဖြင့် ။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ ကို
ကြေငြာပြီးသည့်နောက် ( ၇ ) ရက်
အတွင်း ရပ်ကွက်ကော်မရှင်ရုံး သို့ 
( ပုံစံစာရွက်များကို ရပ်ကွက်
Credit ~ လွင့်မျော တိမ်တိုက်
. ပြောသာပြော ရ ဇီ ကလေး ရေ။
သိပ်ပြီး ပေါ့ နေလို့ မရဘူး။
၁၉၉၀ က လို အပြတ်အသတ် နိုင်မယ် မှန်းမရဘူး။
လူတန်းစား တစ်ချို့ က ဖွတ် မှ ဖွတ် တဲ့။
လူတန်းစားတစ်ချို့ က ဘယ်သူ့ မှ အထင်မကြီး ဘူးတဲ့။
လူတန်းစားတစ်ချို့ က အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကောင်း ဖို့ ငတ်ချင် ငတ် ပါစေ တဲ့။
အခု လူတန်းစာ အစုံ ထိရောက်အောင် ပြော်န်ုင်တဲ့ နည်းးတွေ ကြိုးးစားးနေတယ် အရီးးရေ..
ကျနော် တို့ တစ်ကျောင်းးလုံးးနီးးပါးးပဲ..
လူတန်းစား တစ်ချို့  က အထင်ကြီးတဲ့ လူတွေ ပါမလာလို့ ၊ မပေါင်းကြလို့ မပေါင်းလို့ စိတ်ပိန်နေတာ ..
Credit to Kyaw Soe Min
ရွှေဝါပြည် ရွေးကောက်ပွဲကြီး နီးလာပေပြီ။ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ ပါတီကို မဲတွေပေးကြဖို့ စိုင်းပြင်းကြရင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ကြ ဆော်သြနေကြပေပြီ။ ဒေါ်မှန်တို့ ပါတီ အောင်မြင်မည်လို့ အများကပြောကြတာပါပဲ။ ဒေါ်မှန် ခရီးတခါထွက်လျှင် အားပေးလိုက်ကြထာ ဝက်ဝက်ကွဲပါပဲ။ ကျုပ်ဖြင့် မေ့မေ့ပြီး အားတွေကျ သဘောတွေတောင်ကျမိပါရဲ့။ ကျုပ်တို့မှာ အရေးဆိုရင် လူလာဖို့အရေး ထမင်းဖိုးပေးရ၊ အင်္ကျီပေးရ၊ ဦးထုပ်ပေးရ၊ ဒန်ပေါက်ဝေရနဲ့ တယ်အလုပ်ရှုပ်သာကိုး။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့မပူပါဘူး။ အချိန်တန်ရင် ကျုပ်တို့ မနုဿီဟ ပါတီပဲ အနိုင်ရမှာပါလေ။
အနိုင်ရဖို့ လုပ်ရတာပဲဗျာ ဘာခက်တာမှတ်လို့။ လူပြိန်းကြိုက်နည်းတွေ သုံးလိုက်ရုံပေါ့။ ဦးပဇဉ်းကြောင်စီကွေးတို့ကလည်း တစိုက်မတ်မတ် မဲဆွယ်လာတာ ကျုပ်တို့ ဘာသာ သာသနာတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပါတီအတွက် အသုံးသိပ်ကျတာပေါ့။ လက်ပတောင်းမှာ မီးပူဇော်တာလား ၊ အသာနေ လူတွေ မေ့နေလောက်ပြီ။ အဓိက ကတော့ ဘာသာရေးနဲ့ မှိုင်းတိုက်လိုက် အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ကို ပါလာတာပဲ။ ရင်ခွင်ပိုက် ဘုရင်ဟောင်းဘိုးတော်ရမ်းမွှေကလည်း အစီအမံတွေပေးထားတာ သိပ်ကောင်းတာ။ လောကီနည်းတွေရော သိပ္ပံနည်းကျတွေရော စုံနေတာပါပဲ။
နယ်တွေမှာ အနိုင်ရဖို့က ချေးငွေပေါ့ဗျာ။ အသေအချာနိုင်မယ့် ဒေသတွေရွေးပြီး ငွေချေးပေးမယ်။ ဆွေမျိုးတွေဆီက သိန်းပေါင်း ၃သန်းလောက် ချေးထားတယ်။ တအိမ်ထောင် ငါးသောင်းလောက် ချေးလိုက်ရင် အိမ်ထောင်စု သုံးသန်းလောက် ချေးလို့ရတယ်။ တဝက်ကျန်သေးတာ ခင်ဗျားနဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ။ ကျုပ်တို့ကိစ္စပါ။ ကျုပ်တို့လူမျိုးက ငွေချေးပေးရင် မြီရှင်ကို မပုန်ကန်တတ်ဘူးဗျ။ ဝန်ကြီး ဦးဂျပု လုပ်ကွက်ကလေးတွေ လှတပတ တွေ့ရမှပါ။ အညာတကြော မလိုင်တောင်သာဘက်မှာ စနေပါပြီ။ ဘာ သမဝါယမချေးငွေရမှာလည်း။ အားအားယားယားဗျာ။ ကျုပ်တို့ က စေတနာနဲ့ ချေးပေးနေတာ။ ကျုပ်တို့ကြောက်တာက အဲသည်နေရာတွေ ဒေါ်မှန် ရောက်လာမှာတခုပဲ။ သူရောက်လာရင် အကုန်လျှောက်ပြောတာဗျ။ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘွားတော်။ ခြောက်လည်း မကြောက်၊ မြှောက်လည်း မမြောက်နဲ့ ခက်ပါတယ်။
ပလန်ဘီတွေ ရှိတာပေါ့။ လက်ခွဲပါတီတွေ အများကြီးပဲလေ ။ အခုအချိန်မှာ အသံငြိမ်ထားတယ်။ လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် အကုန်စုသွားမှာပါ။ ကျုပ်တို့က ၃၄% နိုင်ရင် ကိစ္စပြီးပြီလေ။ တက်လာမှာ ကျုပ်တို့ အစိုးရပေါ့။ ဟော ခင်ဗျား နားမလည်ဘူး မဟုတ်လား။ အခြားဝင်ပြိုင်ကြတဲ့ အတိုက်အခံအင်အားစုက ၆၆% နိုင်တယ်ထားအုံး၊ အစိုးရဖွဲ့ရင် လွှတ်တော်တွင်း မဲခွဲရင် ကျုပ်တို့ နိုင်တယ်လေ။ သူတို့ ၆၆%က လွှတ်တော်ထဲမှာ ၄၉.၅% လေ ၊ ကျုပ်တို့က ၃၄%က ခုံ ၂၅.၅% ရတယ် ခုံဦးထားတဲ့ တမတ်သားနဲ့ ဆိုရင် ၅၀.၅% ကျုပ်တို့နိုင်တာပေါ့။ သေချာအောင်တော့လုပ်နေတာပေါ့ဗျာ။
ကျုပ်တို့ စေတနာထားလုပ်ပေးနေတာ ရှိပါတယ်။ ပြည်ပရောက်တွေ မဲပေးနိုင်အောင်ပေါ့။ ပုံစံ ၁၅ အရ ပြည်တွင်းမှာ မဲစာရင်းအမည်ပေါက်သူတိုင်း ပြည်ပမှာ မဲပေးလို့ ရအောင်ပေါ့ဗျာ။ ဆိုပါတော့ သီဟပူရနိုင်ငံက မဲပေးလိုသူက ပုံစံ၁၅ တင်လိုက်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာမြို့မဲဆန္ဒနယ်ကို အကြောင်းကြားပေးမယ်။ သူ့အတွက် မဲကတ် ၃ကတ်ပို့ပေးမယ်။ အချို့လည်း လေးကတ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီဖက်မှာလည်း မဲစာရင်းကပယ်ထားလိုက်မယ်။ စာရင်းက တိကျရမယ်လေ။ သူမဲနှစ်ခါပေးလို့ မရအောင်ပေါ့ဗျာ။ ဟိုဘက်က မဲထည့်လိုက်ရင် ၊ ဒီဖက်ပြန်ရောက်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ကို ကတ်တွေ ပို့ပေးလိုက်မယ်။ ကြိုတင်မဲအနေနဲ့ ထွေအုပ်တွေဆီကိုရောက်မယ်။ ကတ်တပြားစီကို အုပ်စုခွဲထည့်ပေးလိုက်မယ်။ စာအိတ်ကိုတော့ ဖေါက်ဖတ်ရမှာပေါ့။ ဒါမှဘယ်လွှတ်တော်ကို ထည့်ရမလဲသိမှာပေါ့။ ပြီးရင် မဲအားလုံးပေါင်းထဲ တရားဝင် ပေါင်းထည့်ပေးမယ်။ မကောင်းဘူးလား။ စေတနုာ တကယ်ထားပါတယ်။ ကြိုတင်မဲတွေက ကျုပ်တို့ကို ပေးတာ များပါတယ်။ သိတယ်မလား ရှေ့က အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲဆိုတာ။ မျက်လှည့်ပေါ့ဗျာ။
အခု တပ်အတော်များများမှာ တပ်မိသားစုတွေ မှတ်ပုံတင်တွေ လိုက်စုနေတယ်လေ။ သူတို့ မဲပေးဖို့ ဘယ်အားမလဲဗျာ စစ်သားဆိုတာ အချိန်ပြည့် တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတာ။ သူ့မိန်းမက ကလေးနို့တိုက်ရမယ်၊ မအားဘူး။ ဒီတော့ မဲတွေ စုစုစည်းစည်း ညီညီညာညာ နဲ့ မဲပုံးထဲရောက်မယ်။ ကျုပ်တို့ မဲပဲပေါ့ဗျာ။ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ကြိုတင်မဲပေးခိုင်းရမယ်။ ဝန်ထမ်းဆိုရင် ကျုပ်တို့ပါတီဝင်ပဲ။ ဘာမှလာမပြောနဲ့ ဝန်ထမ်းနဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရမယ်ဆိုတာ၊ အခြားပါတီတွေ အတွက်ပဲ မှန်တယ်။ ကျုပ်တို့က ချွင်းချက်ပေါ့ဗျာ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မီတီ အကြီးအကဲ ဦးမြေခွေး ဆိုတာကလည်း ကျုပ်တို့လူလေ။ စာရင်းဇယားသိပ်ပိုင်တာ။ ကွန်ပူတာတောင်မကိုင်ဘူး။ ဦးနှောက်နဲ့ တွက်တာ။ အခု ငါးကြိမ်မြောက် မဲစာရင်းတောင် ၃၀%ပဲ အာမခံမယ်လို့ တထိုင်တည်း ပြောနိုင်တာ။ သိပ်တော်တာ။
ဒေါ်မှန်တို့ ဘက်က အွန်လိုင်းက မလှုပ်နိုင်အောင်။ ကျုပ်တို့ လေလှိုင်းစစ်သည်တွေက သူတို့ ဖေ့စ်ဘွတ် အကောင့်တွေ ကသိကအောက် ဖြစ်အောင် ဆီလို အပေါက်ရှာ Report လုပ်နေတာ အရင် နာမည်ကြီးတွေ ဟောတယောက် ဟောတယောက် ပျောက်နေကြပြီလေ။ သေချာပါတယ်ဗျာ ကျုပ်တို့ပွဲပါပဲ။ လာမယ့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျုပ် သမ္မတကြီး ဦးကြောင်ချေး တွေးရင်း တွေးရင်း ဝမ်းသာလျှက်ပါပဲဗျာ။
ဒီ တစ်ခေါက် ပို စစ် ရခက်အောင် လုပ်ထားတယ်ပြေါတယ်။
အမေအို တစ်ယောက်ကို ကြောက်ပြီး နည်းမျိုးစုံ ညစ်ပတ်နေတာ
ညည်းလူတွေ အဲလောက် ဝီရိယကောင်းလျင်လား ဒီမိုရတာ ကြာပီ… မထင် မထင်
ဒီ ၂ ပတ်ကို မဲစာရင်းမှန်ဖို့ လိုက် ဆော်ဩတဲ့ အဖွဲ့ များများပေါ်လာရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ဘာလို့ မဲ ပေးနိုင်တဲ့ စာရင်းတွေ ကြိုလုပ်နေကြလဲ?
ဒါမှ မဟုတ် လက်ထဲ မှတ်ပုံတင်ရှိရင်၊ မွေးစာရင်းရှိရင်၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်းရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်တယ် မဟုတ်ဘူးလားး
အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့ အင်တိုက်အားတိုက်တောင်းဆိုလို့ မရဘူးလားဟင်။
ခုဟာက သူတို့ ညစ်နေတာ သိရက်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရသလိုပဲ။
အွန်လိုင်းက ကျတော်စစ်ကြည့်တာ ကျတော် မွေးရက် လွဲနေတယ် ညကျရင် ရုံးသွားရဦးမယ်။
အဘတို့ ပိုကြို က်ပေ့ါ .. စာ၇င်းမရှိ အင်းမရှိ… နောက် အဲ့ဒါတွေက လည်း ဖောင်းပွနေတာ .. စိတ် လျော့ စိတ်လျှော့ .. သွေးတိုးမယ် ..
ကိုယ့် အဖေနဲ့ အမေ တစ်သက်ပဲ ဒီ နိုင်ငံကို တွယ်တာမယ်။ ကျန်တဲ့ ကိုယ့် သက်တန်း ကိုယ့်မျိုးဆက် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ မနေခိုင်းတော့ဘူးး၊ မထားတော့ဘူးး
ခုကလည်း ပြေါင်းလဲနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ရှိတုန်းမို့ ဝန်းရံနေတာ။
၂၀၁၅ အဆုံးထိပဲ အစွမ်းကုန် လုပ်နိုင်တဲ့ ဘောင်ထဲက ဝန်းရံသွားမယ်။
အယသာ သိပီမား လူမိုက်ခင်ဇော်… ရက်ပိုင်းလေးတောင် ဒီလောက် ဖြစ်လျင် ဆယ်စုနှစ်၂ခုကျော် စိုက်စိုက်မက်မက် လှုပ်လာတဲ့ ဒီမိုအက်တစ်ဗစ်တွေဘဝ စာနာဓါတ်ပီပေါ့…။ ပြောလိုက်ကြတာ.. ကိုယ်မလှုပ်ရဒိုင်း.. လုပ်လည်းလှုပ်ရော တွေ့တာပဲလေ။ စက်ဆိုတာ အသစ်ပဲကောင်းတယ်.. ကြာလျင် ချို့ယွင်းလာရော.. ဒါကို တဇိတ်တအိတ်လှုပ်တော့ တွေ့တာပေါ့။။ သူတို့ကပဲ သူဒေါ်ဆင်လိုလို အပြစ်ကင်းသလိုလို… သူတို့ကိုယ်စား သောက်သဲနှာဒယ်..။
Credit to Moe Zay Nyein
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ မိုးကျရွှေကိုယ်များစာရင်း – (၁)
ရွေးကောက်ပွဲကာလနီးပြီဆိုတော့လည်း သက်ဆိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အကြောင်းလေးတွေ ရေးရတာပ။ အရင်ကလည်း ရေးဖူးပြီးသားပါ။ ခုထပ်ရေးပါမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာက ပေါ့သေးသေးမဟုတ်၊ အချဉ်မဟုတ်ပါဖူးလို့။ ဒင်းတို့က ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ အမတ်လောင်းတွေကို ဘာညာကွိကွ အကြောင်းပြပြီး ပယ်ချ ထုတ်ပယ်လို့ရပါတယ်။ တလောက အမတ်လောင်း (၅၀) ကျော်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပယ်ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကြားမိကြမယ်ထင်ပါရဲ့။ သူတို့ ပယ်ချတယ်ဆိုတာကလည်း လိုတမျိုး၊ မလိုတမျိုး မူဝါဒနဲ့ပါ။ တခြားပါတီက အမတ်လောင်းတွေကို ဟိုအကြောင်းပြ၊ ဒီအကြောင်းပြပြီး ပယ်ချထုတ်ပယ်ရဲပေမဲ့ ဖွတ်ပါတီက လက်ရှိ နေပြည်တော်မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းညွန့်ရဲ့မိဖတွေ တရုပ်လူမျိုး ဖြစ်နေတာကိုတော့ ရက်နောက်ကျသွားပြီမို့ ဘာညာဆိုပြီး ဖြစ်ပြန်ရောဗျ။ ရွေးကောက်ခံပြီးတဲ့ အမတ်တွေကိုလည်း ဟိုကဒီကအကွက်ဆင်တိုင်တန်းချက်တွေရှိနေရင် အဲဒီ့ကော်မရှင်ကပဲ ခုံရုံးထိုင် ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ အရွေးချယ်ခံရတဲ့ အမတ်ကို ထုတ်ပယ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လိုတမျိုး မလိုတမျိုး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မို့ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလောက်ကြပြီထင်ပါရဲ့။ ဆက်ကြဦးစို့။
လက်ရှိပြည်ထောင်စုအဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ဥက္ကဌအပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင်(၈)ဦး ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမယ်။ (၄) ဦးကတော့ တပ်မတော်က အသွင်ပြောင်းအရာရှိကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလူတွေကတော့ (၁) ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ၊ ကြည်း ၁၁၂၃၆၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး၊ (၂) အတွင်းရေးမှူး ကြည်း ၁၈၈၀၀၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်ထွန်း (ရန်ကုန်စည်ပင်တွင် လာဒ်စားကြောင်း တိုင်ကြားခံရသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ရွေ့ပြောင်းပေးခံရသူ)၊ အဖွဲ့ဝင်၊ (၃) ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မြင့်၊ (၄) ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းကို တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက တပ်မတော်အရာရှိငယ်အယောက်(၇၀)ခန့်ကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးသို့ လွှဲပြောင်းတာဝန် ထမ်းဆောင်စေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးအဆင့်ဆင့်ရဲ့ အကြီးအကဲတွေဟာ တပ်မတော်မှ အသွင်ပြောင်းအရာရှိတွေသာ ဖြစ်နေတာမို့ လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားမျှတမှု ရှိပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယအတွေး ဆောင်းပါးအချို့ကို ဂျာနယ်တွေမှာ တွေ့ရ၊ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ တပ်မတော် အသွင်ပြောင်းတွေသာ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီလိုမျိုးသံသယတွေ ကြီးထွားနေတာကိုတောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်ခါနီးမှာပဲ နောက်ထပ်တပ်မတော်အရာရှိ(၃၅)ယောက် (ဗိုလ်မှူး ၃၀ ဦး၊ ဗိုလ်ကြီး ၅ ဦး)ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းခံရတဲ့ အရာရှိများဟာ တပ်မှာ ရာထူးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းမရှိတောတဲ့သူတွေပါ။ အချို့ဆိုရင်လည်း ယာယီတပ်ရင်းမှူး(ဒုဗိုလ်မှူးကြီး/ဗိုလ်မှူး)အဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မကိုက်ညီလို့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခြင်းမခံရတော့ပဲ အရပ်ဖက်ကို ပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အရာထမ်း(၅၀၀) ကျော် ရှိတဲ့အနက် တပ်မတော်က အသွင်ပြောင်း အရာရှိတွေက ၂၅% ကျော်ရှိနေပြီး အရေးပါတဲ့နေရာတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ ဒီ့နောက်လည်း တဖွဲဖွဲနဲ့ တပ်က အရာရှိတွေကို ရွေးကော်ကို ရွေးပြောင်းပေးနေဆဲပါ။ အရပ်သားအရာထမ်းအများစုကတော့ တပ်မတော်အသွင်ပြောင်းအရာရှိတွေရဲ့ လက်အောက်ခံအရာရှိငယ်များအဖြစ်သာ ရှိနေပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများရှိသော်လည်း ထိုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စအ၀၀ကို တာဝန်ယူ စီမံပေးရသူတွေကတော့ အဆင့်ဆင့်သော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးကို ရုံးချုပ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်လို့ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပါတယ်။ ကော်မရှင်ရုံးချုပ်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကတော့ ကြည်း ၁၈၈၈၀၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်ထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုဗိုလ်ကြီးတင်ထွန်းဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအဖွဲ့မှူးအဖြစ်မှ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (YCDC) သို့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ YCDC မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ပြဿနာအချို့ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အရေးယူမခံရပဲ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချုပ်မှာ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်ဦးစီးတဲ့ ဌာနကြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ဌာနကြီးရဲ့ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်(၃၂)မှ ကြည်း ၂၂၅၅၉၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးနေမျိုးမှ တာဝန်ယူထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ခုံရုံးဆိုင်ရာဌာနကြီးရဲ့ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကတော့ စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ်(၂၆)မှ ကြည်း ၁၈၈၆၆၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုးကျော်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးချုပ်ရှိ အရေးပါတဲ့ ဌာန၊ ဌာနခွဲ၊ ဌာနစုတို့ရဲ့ ညွှန်မှူး၊ ဒုညွှန်မှူး၊ လထညွှန်မှူးနေရာ အများစုမှာလည်း တပ်မှအသွင်ပြောင်းအရာရှိတွေကပဲ နေရာယူထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချုပ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံး(၁၄) ခု၊ ခရိုင်ရုံး(၆၉)ခု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသရုံး(၆)ခုနဲ့ မြို့နယ်ရုံး(၃၃၀)တို့ ရှိပါတယ်။ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကြပ်သူအရာရှိအဖြစ် ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ရှိ အရာထမ်းများက တာဝန်ယူပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံး(၁၄)ခုရဲ့ ကြီးကြပ်သူအရာရှိ(၁၄)ယောက်မှာ အရပ်သားတစ်ဦးမှ မပါဝင်ပဲ တပ်မတော်မှ ကူးပြောင်းလာသူတွေချည်းသာ ဖြစ်နေပါတယ်။